महासचिवले किनेको जग्गा नक्कली परेछ! - Gokarna News
महासचिवले किनेको जग्गा नक्कली परेछ!
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री निवास बिक्री नभएको बताएका छन् ।
प्रम निवास किनबेच भएको छैन, उनले भने ललिता निवासका सम्बन्धमा शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा समिति बनेको छ, सत्यतथ्य सम्पूर्ण रुपमा टुंगो लागेपछि सरकारले अनुचित ढंगले व्यक्तिका नाममा सरकारी जमिन लगेको रैछ भने, सरकारकै नाममा ल्याएर स्थापना गर्छ, यसमा जसलाई अप्ठ्यारो पर्छ, यो उहाँहरुको विषय भयो, सरकारले त्यसै छाड्दैन ।
उनले यस्तो कार्यमा संलग्न सत्तारुढ वा प्रतिपक्ष जो दोषी देखिन्छ उ कारबाहीको दायरामा आउने बताए । तर यो ब्यक्तिको प्रश्न भयो, सत्ता र प्रतिपक्षको कुरा भएन उनले भने, यस सम्बन्धमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारी सक्नु भएको छ । बाँस्कोटाले यो घटनामा पौडेल संलग्न नभएको दाबी गरे ।
ुउहाँ फर्जी धन्दामा संलग्न भएको होइन, उहाँले कसैको नाममा भइसकेको जग्गा मैले किनेको हो भन्नु भएको हो, उनले भने, यसमा अरु पनि धेरै होलान्, उहाँ ठगीमा पर्नु भयो,उहाँ अपराधी होइन । उहाँ पीडीत हुनु भयो, उहाँले जग्गा किन्नु भयो, जग्गा नक्कली परे छ । जग्गा निजी सम्पत्तिको रुपमा जसको नाममा आयो उसैलाई पहिला कारबाही गर्ने बाँस्कोटाले बताए ।
ुआफू पीडित भइसक्नु भयो, उहाँले जग्गा किन्नु भयो, जग्गा परे छ नक्कली, उनले भने, उहाँलाई अपराधी बनाउँछु भन्न त पाइएन, नेकपाको महासचिव भन्ने पद जोडिएको मान्छेले पनि ७।८ आना जग्गा किनेको भएर उहाँ पीडक मध्यमा पर्नु भयो ।ु
जसले बिक्री गर्‍यो उसैबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउनु पर्ने उनले बताए । उनले यो राजनीतिकरण गर्नु पर्ने विषय नभएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यही वकालत गर्ने उनले बताए । जसले किन्यो, उ के पीडक हुन्छ । उहाँलाई त झुक्याइएको हो, उनले भने, सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हो, भूकम्प आए कसलाई कहाँ लगेर राख्ने हो टुंगो छैन, भएका जति व्यक्तिले कब्जा र्गो नक्कली सिर्जना सरकारले छुट दिन सक्दैन । यसमा यो वा त्योको कुरा होइन । पीडक र पीडित छुट्याउनु पर्छ । उनले यो सार्वजनिक महत्व विषय बनेर राम्रो भएको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।